Qeybtii Koowaad Jaceylkii Aan Macquul Galka Aheyn Iyo mucjisadiisii Dahsooneyd..!! - Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
jaceylkii aan macquul galka aheyn iyo mucjisadii dahsooneyd
Qisadaan sidaad magaceedaba ka dhadhansan kartaan waa qiso jaceylka uu galayo meel aan macquul aheyn, inta aay socoto sheekadaan xiisaha badan waxaad arki doontaan mucjisooyinka jaceylka ee sida dahsoon kusoo if baxo.
Sheekadaan oo aad si toos ah kala socon doontaan kobciye.com maalmaha Jimcada, Axada iyo weliba arbacada waxaadna kala kulmi doontaan in badan oo maskaxda bini aadanka geli karin, qisadaani waxaa qoray Ibrahim Ali Abdi “Kalafoge” oo si toos ah idiin kugu soo gudbin doono Jaceylkii Aan Macquul Galka Aheyn Iyo mucjisadiisii Dahsooneyd..!!
Wakhtigu waa casir liiq, dabeyl xoogan ayaa dhaceyso, waxaan fadhiyaa tarjiin ama garden ku hareereysan guriga aan ku noolahay halka aan joogo waaa swedan Xaafada Borlänge.
Anigoo ku raaxeysanayo jawiga qorax sii dhaca kuna jidho xasuus jaceyl oo aad u qoto dheer balse aanan garaneyn qofkaas aan jeclahay oo aan sidaasi oo idil ugu fikirayo, waxaan dhex maquurtaba mowjadahaas kala gedisan ayaa waxaan maqlay dhawaqa hooyadeey oo ileh yoonis kaalay hooyo.
Hooyadeey oo aan aad u jeclaa ayaan dhankeedii u dhaqaaqay qeybta fadhiga ayey ila tagtay oo waxaan dareemay maanta arin culus in leygala hadli rabo.
Hooyo Caasho: Wiilkeygiyoow waxaan maanta kugu wacay ayaa ah xalay waxaa somalia iga soo wacay aabahaaa oo wuxuu igu yiri waxaan doonayaa wiilkeyga Yoonis inaan ku daro gabadha curada u ah saaxiibkeey qaasin oo hada joogo nairobi oo aan kasoo wada hadalnay arintaas adigana waxan donayaa inaad lasoo hadasho wiilkaada yoonis ayuu igu yiri.
Aniga: Hooyo waa see aniga guur xiligaan diyaar uma ihi tan labaad aniga qof aan ka helin amaba aan arkin ma guursan karo.
Hooyo Caasho: Haa wiilkeygii waa runtaa inta aad igu tiri aabahaa waan u sheegay wuxuu igu yiri gabadha waa gabadh aad u akhlaaq iyo diin wanaagsan nairobi ha tago ha iska soo arko cidana in mudo ah hala soo joogo kadib go’aan haka soo gaaro.
Aniga: Hooyo arinta aabahey ilama qurxano balse waxan ku qasbanahay hadalka waalidkeey inaan adeeco waayo anoo wax aheyn alle ka soko adinkaa muuqeyga maanta ku dadaalay, ee hooyo arinta aabe adiga sidee kula tahay.
Hooyo Caasho: Wiilkeygii aniga aad baan u jeclahay inaan arko ubad aad dhashay oo dhabteyda saaran guurka laguu soo bandhigayna aniga niyad ahaan waan ku farxay adigana wan hubaa farxadeyda inaad xaqiijineysid oo aad sii xoojin doontid.
Hooyadeey hadalkeeda ma diidi karin waan ku qancay sida naxariista leh ee aay wax walbo iiga dhaadhacsiisay, waxaan ku soo noqday jawiga barxada gurigeena qoraxdii oo aad usii gaduudatay kuna dhaw iney cirifteeda u danbeyso qarsato.
wadahadal dheer oo labada qoys dhex maray kadib waxaan soo goostay ticket-kii aan ku soo aadi lahaa magaalada nairobi.
Waxaan imid magalada nairobi maalin jimco ah galabkii waxaa air-port-ka iga soo doonay qof aan sidaa u da weyneyn balse aan ku qayaasay 37 jir meelahaas balse bilicda iyo quruxda ka muuqato aad yaabeysid.
Waxaan la dhacay qoftaan sidee isku soo qurxisay welibana gaari yar oo cas misana ayada aay wadatay ayey boorsooyinkii aan watay kusoo dhurtay igana soo qaaday air-port-ka Joma Kenyatta.
Waxaan isku dayay inaan fadhiistodhanka gadaale ee baabuurka yaraa balse qoftii isoo doontay ayaa iga diiday oo igu tiri dhanka hore soo fadhiiso, anigoo yara xishoonayo ayaan fadhiistay gaarigii shirkiisa hore.
Air port-ka markuu gaariga kasii baxay ayaan waxaan ku bilaabay eegmo dhinac dhinac ah indhaheygu waxey qabteen qoftii oo dhanka dhagta ku leh xaad illaa iyo dhuunteeda hoose hareysay, cadaanta iyo bilacda ka muuqatana aad yaabeysid dharka aay ku labisantahayna waa dhar kuwa ugu soo jiidashada iyo dareen kiciska badan.
Anigoo sii tagay oo illaa hoos sii eegayo ayey hal mar igu xaday indhaha misena waxey aragtay anoo ku maqan inta aay isha ii jebisay ayey igu tiri waa iska caadi sidaad indhaha iila raaceysid tanina waxaan filayaa iney guusheyda koowaad noqon doonto.
Waan isku yaxyaxay oo waan naxay car waaba kaa adiga hadal, inta aan sii soconay marna ma aan odhan magacaa kumaa tahay ayadana si lamid ah arimahaas ma aaysan i weeydiin oo waxaan u fahmay iney tahay qof ka dharagsan waxaan ahay iyo ula jeedkeyga.
Sidaan u soconay ayaan ka war helay baabuurka oo meesha gawaarida la dhigto lagu baakimayo, waxaana lee raaciyay waa sidaad usoo duushay waa daalantahay intaad tagin xaafada aan kuu wado maqaayadaan aadka u cunto sareyso ayaan wax ka cuneynaa adigana hotelkaan in daqiiqado ah ku naso……………..
Tolloow yaad u maleyneeysaa inuu Yoonis usoo gacann galay.??
Ma u maleyneeysaa qofka uu la socdo iney tahay qofkuu usoo baxay ama waaba qof kale??
Mucjisada sheekada ayaa halkaasi ka bilaaban doonto.
La Soco Sheekadan kobciye.com iyo maalmaha Arbacada iyo Jimcada iyo Axada..
Q8aad Sheeko Murtiyeed: Ani Ma Nooli, Yaa Qaatay Kabaheygii Iyo Qalinkii Aamina Musse Wehliye..
KaLaFoGe August 5, 2013 August 5, 2013
Akhristoow Si Aad Noloshaada Qiime Sare Ugu Yeesho Raac Hababkaan..
Marwada Ninkeeda Weeydiiso Su’aalahaan Wuxuu U Qaadaa Naceyb Aan Xad Laheyn.
KaLaFoGe August 29, 2015 August 29, 2015